मेरो बहिनी संगितालाई शुभकामना !! -गगन थापा
मेरो बहिनी संगितालाई शुभकामना !! - गगन थापा
यो वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा मेरो लागि विशेष भएको छ। २०६५ सालमा पाल्पाको रामपुरको एक कार्यक्रममा पुग्दा कालिगण्डकी किनारामा चिया दोकान गर्ने दल बहादुर रानासंग भेट भयो। छोटो कुराकानीमा उनले छोरी संगितालाई पढाउन नसकेको गुनासो गरे। यो सुनिसकेपछि मलाई हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र भाइबहिनी नामक एउटा अभियान शुरू गरें। यो अभियान एकदम सामान्य थियो। हाम्रो देशमा संगिता जस्ता लाखौं भाइबहिनी छन् जो शिक्षाको वञ्चित छन्। यस्ता भाइबहिनीहरुलाई हामी जस्ता केही मानिसहरुले जसले पढाउन सक्छन् तिनले एक-एक जनाको संख्यामा पढाउने हो भने अशिक्षाको समूल अन्त्य हुन्छ। यहि विचारबाट प्रेरित भएर मैले संगितालाई काठमाडौंको न्यू डन बस्को विद्यालयमा कक्षा ६ मा भर्ना गरें।तीनै संगिताले चाबहिल स्थित रिलायन्स एकेडेमीमा अध्ययन गरि आजदेखि शुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा दिनेछिन्।
मलाई यो परिक्षामा मेरो आफ्नै बहिनीले दिएको जस्तो लागिरहेको छ ।
पाल्पा घर भएकी नानीलाई काठमाडौंमा आवासीय विद्यालयमा राखेर पढाउने काम आर्थिक रुपमा पनि कम चुनौतीपूर्ण थिएन। यसै सन्दर्भमा केही आर्थिक सहुलियत प्रदान गरेकामा न्यू डन बस्को र रिलायन्स एकेडेमीलाई पनि धन्यवाद।
यो सबै भन्दैगर्दा म केमा प्रष्ट छु भने हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यसकालागि हामीले पर्याप्त काम गर्न सकिरहेका छैनौं। यी सुधारका काम गर्न आवश्यक छ र यो काम गर्दै गर्दा यस्ता साना कामहरु पनि आवश्यक छ जसले हाम्रो सबैलाई शिक्षित र सक्षम बनाउने उदेश्यमा केही सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
कक्षा १२ को परिक्षामा सम्मिलित हुने सम्पूर्ण भाइबहिनीलाई सफलताको शुभकामना!! -गगन थापा (गगन थापाको फेसबुकबाट)